दिपकराजलाई कसले बनायो ‘महानायक’ ? - News25 Daily
July 7, 2020 July 7, 2020 adminLeaveaComment on दिपकराजलाई कसले बनायो ‘महानायक’ ?
सामाजिक संजाल केही दिनयता ‘महानायक’को बिषयमा गर्माएको छ । निर्देशक दीपाश्री निरौलाले ‘राजेश हमाल महानायक हो र ?’ भन्दै प्रश्न गरेपछि उनको चर्को आलोचना भैरहेको छ । उनले माफी मागिसक्दा पनि आम दर्शकले उनको आलोचना गर्न छाडेका छैनन् ।
दीपाको यो तर्क सार्वजनिक भएपछि कतिपय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले ‘दीपकराज गिरीलाई महानायक भन्नुपर्ने’ भन्दै दीपामाथि ब्यङ्ग्य पनि कसेका छन् । महानायक’को विवादमा आफू पनि तानिएपछि कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीले मुख खोलेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘मेरो बाटो, मेरो लक्ष कहिले पनि महानायकको घरतिर मोडिएन । मेरो गल्ती विना नै मलाई जबरजस्ती महानायक बनाउनेहरुलाई धन्यवाद ।’
दीपकले आफू कलाकार भएदेखि नै हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, सन्तोष पन्त जस्तो बन्न चाहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । दीपक अगाडि लेख्छन्–‘जब असत्य चिच्याई चिच्याई बोलेर भीड जम्मा गरिरहेको हुन्छ, सत्यले चुपचाप आफ्नो बाटो हिड्नु राम्रो । दीपाश्रीले ‘महानायक’को बिषयमा दिएको अभिव्यक्तिमा नायक राजेश हमालले जवाफ फर्काइसकेका छन् ।
निर्देशक तथा कलाकार दीपाश्री निरौलाले नायक राजेश हमालका फ्यानसँग माफी मागेकी छन् । उनले राजेश हमाललाई सुपरस्टार नै होइनन् भन्ने हैसियत आफ्नो नभएको पनि बताएकी छन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले ‘राजेश हमाल महानायक हुन् र ?’ भन्दै प्रश्न सोझाएपछि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
राजेश हमाललाई रुचाउने मानिसहरूले दीपाको आलोचना गरेपछि दीपाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भनेकी छन्–‘मैले चलचित्र क्षेत्रका महानायक भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा परेको विषय परिस्थितिमा एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर आफूलाई वर्षौ‌ंदेखि सहयोग गरेका प्राविधिकहरूलाई परेको पिर मर्कामा सहयोगी किन हुन सक्नुभएन भन्ने आशले बोलेकी हुँ ।’
दीपाले सबैसँग गुनासो गर्न पाइने भन्दै उच्च पदमा बसेको व्यक्तिसँग आशा पनि धेरै हुने उल्लेख गरेकी छन् । दीपाले राजेश हमाल सुपरस्टार नै होइनन् भन्ने हैसियत आफ्नो नभएको समेत बताएकी छन् । उनले काठमाडौंमा पाउरोटी पनि खान नसक्ने अवस्थाबाट आफूले संघर्ष गरेको भन्दै टुप्पोबाट नपलाएको पनि स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनले राजेश हमाल सधैं सुपरस्टार नै रहेको भन्दै उनले हमाललाई भगवान् नै बनाउने पक्षमा आफू कहिल्यै नभएको पनि बताएकी छन् । दीपाले आफू महिला कलाकार भएकाले केही व्यक्तिहरूबाट आएको सुन्नै नसकिने गालीलाई सामान्य रुपमा लिएको पनि बताएकी छन् ।
२१ जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ ड्रममा राखेर बेच्नका लागि खुल्यो अनुमतिपत्र
जनतालाई रोग र भोकबाट बचाउने दायित्व सरकारको हो : प्रधानमन्त्री ओली
एसईई : सबै विद्यार्थीको न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड !